WWF ဆိုသည်မှာ? | WWF
Home » WWF ဆိုသည်မှာ?
WWF သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စိတ်အားထက်သန်သူများ စုပေါင်း၍ မော့ဂ် ကြေညာစာတမ်း (Morges Manifesto) ဟု ခေါ်တွင်သော သဘောတူညီချက်ကို စုပေါင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရာမှ စတင် ပေါက်ဖွားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံး ရုံးကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ မော့ဂ် (Morges) မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပိုမို ထင်ဟပ်မိစေရန် ရည်ရွယ်၍ World Wildelife Fund (ကမ္ဘာ့ သားငှက်တိရစ္ဆာန် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့) မှ World Wide Fund for Nature (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့) သို့ အမည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံများတွင် မူလအမည်ကို ဆက်လက် သုံးစွဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။
WWF စတင် တည်ထောင်သော ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ချီချီဟုခေါ်သည့် ပန်ဒါဝက်ဝံကြီး တစ်ကောင် လန်ဒန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ ရောက်ရှိလာမှုက ပန်ဒါအမှတ်တံဆိပ်ကို ရွေးချယ်ရန် တွန်းအား စတင် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
WW တည်ထောင်သူများက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဘာသာစကားများ မည်မျှ ကွဲပြားစေကာမူ သန်မာမှု၊ မည်းနက်သော မျက်ဝန်းများ၏ ကောင်းစွာ စွဲဆောင်နိုင်မှု စသည့် အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံသော ပန်ဒါရုပ်ပုံကို အဖွဲ့အစည်း အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံ ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အဖြူ-အမည်း ပန်ဒါ အမှတ်တံဆိပ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမှတ် သင်္ကေတ ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်။
WWF-မဟာမဲခေါင် အစီအစဉ်သည် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း ဇီဝ မျိုးစုံမျိုးကွဲများအား ထိန်းသိမ်းရန်၊ သားငှက် တိရစ္ဆာန်များ၊ ဂေဟစနစ်နှင့် လူသားများ အားလုံးအတွက် တည်မြဲလုံခြုံသော အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ WWF-မဟာမဲခေါင် အစီအစဉ်သည် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများတွင် ရုံးစိုက်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ မြန်မာရုံးခွဲသည် WWF-မဟာမဲခေါင် အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံး ဖွင့်လှစ်သော ရုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
အမှတ် ၁၅ (စီ)၊ သံတမန်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
မစ္စတာ ခရစ္စတီး ဝီလျံ
EFN ပညာသင်ဆုနှင့် ရန်ပုံငွေများအတွက်
စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှု ညှိနှိုင်းရေးမှူး
WWF-မြန်မာ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး မဟာဗျူဟာများ
အစိုးရ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများအား အောက်ပါအချက်များဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသွားရန် ဖြစ်သည်။
အစိမ်းရောင်းစီးပွားရေး (Green Economy) စည်းမျဉ်းများနှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုများ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ထည့်ဝင် သုံးစွဲနေသည့် သဘာဝအရင်းအနှီးနှင့် ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများအား အကာအကွယ်ပေးမည့် အမျိုးသားအဆင့် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး မူဘောင်နှင့် လမ်းညွှန်မြေပုံတို့ အပါအဝင် အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
အစိမ်းရောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ (Green Investments)၊ ရေရှည်တည်မြဲသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံများအား အားပေးအားမြှောက်ပြုပြီး လူမှုနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် အစောင့်အရှောက်စီမံမှုများနှင့် တာ၀န်သိ စီးပွားရေးပုံစံများအား စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ငွေးကြေးစီးဆင်းမှုများတွင် ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင်လာကြစေရန် စည်းရုံးခြင်း။
ရေရှည်​တည်မြဲသော ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများနှင့် မြစ်ဝှမ်းဒေသ စီမံခန့်ခွဲမှုများအား အားပေးမြှင့်တင်ပေးပြီး တနင်္သာရီဒေသနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တို့တွင် ပြည့်စုံရှင်းလင်း တိကျသော ရေရှည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ကူညီပေးကာ သဘာဝနယ်မြေများ ကွန်ယက် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အစီအမံများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် မွမ်းမံပေးမည့် အလုံးစုံ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော မြေယာ အသုံးချမှု အစီအစဉ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဦးဆောင်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ပေးခြင်း။ တနင်္သာရီ ဒေသသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေသော ရှည်လျား သေးသွယ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကျားကုန်ကူးမှု ဖြစ်စဉ်များကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တားဆီးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျားကောင်ရေပြန်လည်ပြည့်မှီလာစေပြီး သားငှက်တိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု ဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် မွမ်းမံပေးခြင်းနှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာအောင် အားပေးမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် အခြားသော အရေးပါသည့် သားငှက်တိရစ္ဆာန် ကုန်သွယ်မှု ပြဿနာများအား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့များကိုလည်း ရပ်ရွာအဆင့်မှစ၍ နိုင်ငံအဆင့်အထိ သဘာ၀အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှုများတွင် ပါ၀င်နိုင်လာစေရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
WWF ၏ မဟာဗျူဟာ ၅ချက်ကိုအခြေပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုများသည် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ချေ လျော့ပါးစေခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုမှ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေ လျှော့ချရာတွင် ကူညီခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး မဟာဗျူဟာများနှင့် သင့်လျော်အောင် စီမံရေးကို လူသိများ လက်ခံလာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို အဓိက အာရုံစိုက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် WWF-မြန်မာ ၏ မဟာဗျူဟာသည် သားငှက်တိရစ္ဆာန်များ တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး / အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ အပါအဝင် မြန်မာနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်နိမိတ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကိစ္စရပ် အများအပြားကို အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။